कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभाबकारी काम गरेन:शेरबहादुर देउवा (भिडियो सहित) | News Polar
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभाबकारी काम गरेन:शेरबहादुर देउवा (भिडियो सहित)
एमसिसीबारे भ्रम फैलाईयो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ । आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे सभापति देउवाले देशको स्वास्थ्य संयन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउँदा पनि सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाउनु भयो । सभापति देउवाले सरकारले नै सिलन्यास र उद्घाटनका नाममा भिडभाड गरेको भन्दै लकडाउनको अबधिको सही सदुपयोग गर्न पनि सुझाब दिनुभयो ।
सभापति देउवाले पिसिआर परिक्षण नगरी उपत्यका छाड्न दिने कार्यले सँक्रमण सबै तिर फैलिएको भन्दै परिक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी उँहाले सक्रमितका लागि अक्सिजन, भेन्टिलेटर , अस्पताल , औषधीको प्रबन्धका साथै सीमा नाकाहरुका पिसिआर परिक्षण र होल्डीङ सेन्टरको प्रबन्ध मिलाउन माग गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा देउबाले बैकल्पीक सरकार गठनका लागी बहुमत नपुगेका कारण यो बिषय थाती रहेको बताउनु भयो । उँहाले भन्नुभयो ‘सरकार बनाउन त बहुमत चाहियो नि । जसपाले निर्णय गरेको छैन । हामीसँग बहुमत छैन के गर्ने ?’उहाले सरकार निर्माणका बारेमा जसपा संग कुराकानी भै रहेको जानकारी गराउदै समय आएपछि मात्र यस बिषयमा स्पष्ट पार्ने बताउनु भयो ।
अर्को एक प्रशंगमा सभापति देउवाले एमसिसीबारे भ्रम फैलाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाले भन्नुभयो ‘बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइरालाको पालादेखि यो एमसिसी सुरू भएको हो। मेरो बेलामा मात्रै आएको होइन। मेरो बेलामा यत्ति भएको हो क्याबिनेट डिसिजन गरेर मन्त्रीजीलाई पठाएको हो ‘यो ठूलो अनुदान हो, ब्याज तिर्नु पर्ने पनि छैन। यो केबल अनुदान हो।’
उहाले यो सित्तैमा दिएको अनुदान हो, ब्याज तिर्नु पनि पर्दैन। तर हरेक भ्रम फैलाइएको छ। अमेरिकी सेना आउँछ भनेर, कसले आउन दिन्छ नेपालमा अमेरिकी सेना ? ‘अमेरिकी सेना आउन दिउँला त म आफैँले? यस्ता झुठा प्रचार गर्ने?’
देउवाको बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ
देश कोभिड—१९ महामारीको दोस्रो चरणमा छ । अत्यन्त कम संख्यामा पिसीआर परिक्षण हुँदा पनि ३७ प्रतिशत संक्रमित देखिनु भनेको देशमा संक्रमितको संख्या धेरै बढी भएको सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ । संक्रमितहरुको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ । बढ्दो संक्रमण सँगै आइसियु बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको टड्कारो अभाव देखिन थालेको छ । यस्तो परिस्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता र अर्कमन्यता जिम्मेवार छ । यो सरकार न विगतका गल्तीहरुबाट सिक्छ न नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरुले दिएको सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात गर्छ ।
अधुरा कामलाई नै पूरा भएको भन्दै उद्घाटन, भिडभाड र तडक—भडकमा मग्न ओली सरकारले संक्रमण रोक्ने कुनै ठोस काम नगरेकोले फेरि लकडाउन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
कोभिड—१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण जनताले भोगिरहेको समस्याबाट पार पाउन संक्रमण रोकथाम र उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाई लकडाउनको समयलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गरी तत्काल निम्न काम गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आफू पनि जोगिन र अरुलाई पनि जोगाउन कोभिड–१९ स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाली कांग्रेस हार्दिक अनुरोध गर्दछ । नेपाली कांग्रेस कोभिड—१९ संक्रमणलाई रोकथाम गर्न, संक्रमितहरुलाई उपचार पहँुचमा सघाउन तथा राहत कार्य गर्न निम्न लिखित काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।
प्रकाशित : बैशाख १७, २०७८, १६:११:३५